Turquoise Mountain Trust's Page - Myanmar Network
Turquoise Mountain Trust's Likes
Turquoise Mountain Trust's Friends
Turquoise Mountain Trust has not received any gifts yet
Turquoise Mountain Trust's Page
📌 Join this special mini workshop series to learn how you can overcome common business challenges and improve practices in key business areas.
📌 သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ အများအားဖြင့်တွေ့ရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ဘယ်လိုကျော်လွှားရမယ် ဆိုတာနဲ့ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နယ်ပယ်မှာ ဘယ်လို တိုးတက်မှုရှိအောင် လေ့ကျင့်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေကို ဒီ အထူးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အသေးလေးတွေမှာ ဝင်ရောက်ပြီးသင်ယူလေ့လာလို့ရပါတယ်။
📌 These workshops will be held in Burmese and are for anyone who wants to start or improve their craft business. Artisans, craft producers, entrepreneurs, makers.
📌 ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးတွေကို ကျင်းပရာမှာ မြန်မာလိုပဲဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပြီး လက်မှုလုပ်ငန်းစတင်မဲ့သူ၊ ပိုပြီးတိုးတက်လိုသူ၊ လက်မှုပညာရှင်များ၊ လက်မှုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူများ၊ လက်မှုပစ္စည်းပြုလုပ်သူများ မည်သူမဆိုလာရောက်နိုင်ပါတယ်။
COST: Free 🆓
၀င်ကြေး အခမဲ့ အစီအစဉ်လေးပါ။
SIGN UP HERE: https://docs.google.com/forms/d/1XolKcXESaj9DacpG7LP4Kq7O2IgtTPKXpmQTqu_LdfU/edit
Choose from any or all of the workshops below:
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲလေးတွေကို ရွေးချယ်တတ်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ (အကုန်လာတတ်လည်းရပါတယ်နော်)
"what sets your business apart from others"
💛 StartingaCraft Business
"what to make and where to sell it"
💚 Simple Steps to Effective Marketing (ထိရောက်သောဈေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက် ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းလေးများ)
"get more sales"
💙 How to Make A profit
🔷 RSVP: info@myanmarartisantoolkit.org | or through Facebook
🔷 Facebook Page ကနေတဆင့် ဒါမှမဟုတ် info@myanmarartisantoolkit.org သို့ စာရင်းပေးသွင်းပြီးလာရောက်နိုင်ပါတယ်။
---- See you soon -----
Turquoise Mountain Trust's Blog
Posted on January 19, 2017 at 15:150Comments 1 Like
Turquoise Mountain Finance and Admin Assistant
TURQUOISE MOUNTAIN, MYANMAR IS LOOKING FOR A…
Jewellery Workshop Supervisor
Posted on October 17, 2016 at 11:060Comments0Likes
Turquoise Mountain isanon-profit, non-governmental organization which works to restore historic areas and traditional crafts asasource of jobs, skills…
Posted on June 28, 2016 at 12:06 1 Comment2Likes
CRAFTS PROGRAMME ASSISTANT
Posted on May 20, 2016 at 13:210Comments 1 Like
Turquoise Mountain isanon-profit, non-governmental organization which works to restore historic areas and traditional crafts asasource of jobs, skills andarenewed sense of pride and identity. Turquoise Mountain Trust has been successfully completing projects in Afghanistan since 2006, has been set up in Myanmar for overayear, and is looking to recruitatalented and ambitious Programme Manager for its Crafts project, who shares the vision of the organisation and will lead on its…